Andro: 28 Novambra 2019
Rahoviana no hotontosaina ny Tananan'i Istanbul?
Channel Istanbul Tender Rahoviana? Parlemantera Planning sy ny Tetibola Vaomieran'ny ny mpanolotra ao amin'ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan, noho ny fampiasam-bola natao amin'ny fiaramanidina sy ny fitsipika ao Torkia, mihoatra noho izao tontolo izao eo ho eo [More ...]
Ireo tetikasan'ny rafi-pitaterana an-tanàn-dehibe dia mandray anjara betsaka amin'ny toekarena
Ireo tetikasan'ny rafi-pitaterana an-tanàn-dehibe dia mandray anjara betsaka amin'ny toekarena; Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, dia nanao fanolorana ny Vaomiera momba ny drafitra sy ny teti-bolan'ny TGNA. [More ...]
Fivoarana 94 ao Ankara Sivas YHT Studies
Fivoarana 94 ao Ankara Sivas YHT Studies; Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, dia nanao fampisehoana tamin'ny Vaomieran'ny drafitra sy ny teti-bolan'ny Antenimieram-pirenena Tiorka. [More ...]
Lalana mihamalalaka ny fampiharana Cover Cover
Lalana miely ny làlan-tsarety ao amin'ny làlambe. Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, dia nanao fampisehoana tamin'ny Vaomieran'ny drafitra sy ny teti-bolan'ny Antenimieram-pirenena Tiorka. [More ...]
68 Nihena ny salanisan'ny olona very tamin'ny lozam-pifamoivoizana
Ny Porofo 68 dia nihena tamin'ny olona maro izay namoy ny ainy tamin'ny lozam-pifamoivoizana; Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, dia nanao fampisehoana tamin'ny Vaomieran'ny drafitra sy ny teti-bolan'ny Antenimieram-pirenena Tiorka. [More ...]
Isan'ny fitaovam-pitan'ny fiaran-tsambo Eurasianina mihoatra ny an-tapitrisany tapitrisa 48
Isan'ny fiaran-tsambo Eurasianina nandalo 48 tapitrisa; Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan dia nanao fampisehoana tao amin'ny Vaomieran'ny Parlemanta sy ny Vaomieran'ny Tetibola. [More ...]
Fanatsarana ny kalitaon'ny fitaovam-pitaterana an-dàlana
Manatsara ny kalitaon'ny fitaovam-pitaterana an-dàlana; Parlemantera Planning sy ny Tetibola Vaomieran'ny ny mpanolotra ao amin'ny Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Turhan Minisitra, ny Vondrona Eoropeana eo ho eo avy ny taona ao Torkia, izay 20 480 fiara / 1000-seater fananana fiara haavon'ny [More ...]
Mizara aloha ny fandaniam-bolan'ny arabe amin'ny lalana 62
Ny laharam-pahamehana amin'ny fanjariambola amin'ny làlana dia misy laharana voalohany amin'ny 62 Share; Nanao fanolorana ny minisitry ny drafitra sy tetibola ho an'ny parlemanta, ny minisitra Turhan, izay niresahana ny teti-bolan'ny Minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa 2020. [More ...]
Ny vola miditra amin'ny fitaterana dia tsy manankarena
Tsy ilaina ny famatsiam-bola amin'ny fitaterana; Nanao fanolorana ny minisitra Turhan tao amin'ny Vaomieran'ny drafi-piasan'ny Parlemanta sy ny Tetibola izay ifanakalozana ny teti-bolan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa 2020. [More ...]
Fiarovana ny famatsiam-bola ho an'ny Gaziray Fividianana fiara ao Gaziray
Protocol ho an'ny fividianana ny fiaram-bidy Gaziray; Gazety Metropolitan Gaziantep dia nanao sonia protocol ho an'ny fividianana fiara izay hiasa ao amin'ny Gaziray Suburban Line. Araka izany, nomen'ny Islamic Development Bank (IDB) [More ...]
Arifiye Ankara Fiomanana amin'ny lamasinina!
Arifiye Ankara Fiomanana fandaharana amin'ny lamasinina! Talohan'izay, ny fiaran-dalamby Istanbul - Ankara 'Bosphorus Express' dia mihazakazaka eo ambanin'ny anarana, Arifiye - Ankara dia hiasa eo anelanelan'ny. Nampahafantarina ihany koa ny andro fitsidihana voalohany… Istanbul [More ...]
Kayseri Tram famaritana stam ary Map: Kayseri Tram fandaharana, Toeram-piasana sy Map; Kayseray dia rafi-pitateram-bahoaka fitateram-bahoaka maivana izay nanomboka ny serivisy tao Kayseri ao 2009. ny KAYSERAY [More ...]
Fandrefesana ny kalitao amin'ny rivotra ao Istanbul Metro
Fandrefesana ny kalitao amin'ny rivotra ao Istanbul Metro; Ny fandrefesana ny kalitao an'ny rivotra dia natao tao amin'ny lalamby tao Istanbul. Ny valiny dia ambanin'ny sanda fetra. Metro Istanbul, orinasam-pananana iray avy amin'ny Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), dia miasa ao Kirazli - Basaksehir. [More ...]
Nanomboka teo amin'ny Diliskelesi sy Tavşancıl Fiara fiaran-dalamby ny sanda fiasana
Ny ben'ny tanàna teratany Dilovası Hamza Şayir dia nilaza tamin'ny olom-pirenena fa nanomboka ny asa teo amin'ny gara Diliskelesi sy Tavşancıl. Ny ben'ny tanàna teratany Dilovası Hamza Şayir dia naka ny vokatry ny famongorana ny lalana Ankara hatramin'ny nitondrana andraikitra. [More ...]